Mpanamboatra sinoa tsara kalitao marika enamel manokana kalitao fiarovana vy fanamafisam-peo ho an'ny milina fanamafisam-peo firaka zinc alim-bary vita amin'ny marika marika sheriff metal badge mpanamboatra sy orinasa | Hobrin
Mpanamboatra sinoa faran'izay tsara fanao amin'ny enamel logo avo lenta vy fiarovana miaramila pin badge ny vidin'ny firaka zinc firaka embossed fanao pin sheriff vy badge
● Fanodinana: Fametahana / famoahana maty
● Fitaovana: firaka varahina / zinc
● habetsany: 50PCS farafahakeliny ho an'ny tsirairay
● Fitaovana: pin / satroka lolo / bobongolo plastika / satroka andriamby (jereo ny sary etsy ambany)
Ny paositry ny polisy avo lenta dia nohosorana tsara tamin'ny lafiny 3.
* Ny fitaovana dia mety ho firaka zinc, varahina na varahina.
* Ny ankabeazan'ny mariky ny polisy dia manana famolavolana dome miaraka amina famaranana miloko roa sy ny fiarovana mafy Ballou eo an-damosiny.
* Manelatra ny lamosina hampihenana ny lanja.
* Ny endriny manokana ihany no tongasoa.
* Omeo kitapo misy marika sy kitapom-batsy.
* Lohateny hafa; isa sy anarana dia azo fenoina na tsy feno loko amin'ny sokitra laser.
* Ny habetsan'ny kaomandy farafahakeliny ho an'ny endriny tsirairay dia singa 50
Ny marika famantarana ny polisy dia ambony noho ny mpifaninana hafa amin'ny plating, polishing, kojakoja matanjaka kokoa ary rafitra maharitra. Ny karatra polisy dia kalitao amin'ny firavaka, ary manantena izahay fa ny mpanjifa dia afaka mitafy ny marika amin-kaja am-pireharehana.
Hobrin Badge sy Gift orinasa manana traikefa manan-karena amin'ny badge oval sheriff manokana, badge fiarovana fiarovana, badge metaly kintana 5, badge 6-star ary badge metaly kintana 7 isa, sns.
Ny mari-pamantarana Sheriff dia manana tantara lava, nanomboka tamin'ny Moyen Âge, raha nampiasa ny badge ho mariky ny fahefana ny Knight. Amin'izao vanim-potoana maoderina izao dia mbola misy io tandindona io satria ny mariky ny sheriff dia heverin'ny maro ho mariky ny fahefana. Saingy ny badge sheriff raha ny marina dia manana fampiharana azo ampiharina kokoa any Etazonia. Ny badge an'ny sheriff dia mazàna ataon'ireo manana kalitao ara-pitondrantena avo indrindra. Ny mariky ny sheriff dia iray amin'ireo famantarana lehibe eken'ny fiarahamonina
Ny mari-pamantarana miaramila dia loka nomen'ny hery nasionaly mitam-piadiana. Izy io dia ampiasaina hanondroana ny naoty, ny mari-pahaizana na ny zava-bita amin'ny sehatra matihanina maro. Izy io dia azo ampiasaina ho fitaovana fampahalalana ho an'ny mpiasa manatanteraka asa sasany. Ny mpiasan'ny serivisy dia eken'ny loka sy medaly maro. ravaky ny miaramila, ny marika toy izany dia azo hanaovana fanamiana miaramila.
Ny orinasanay dia mpanamboatra matihanina ny badge polisy any Shina. Izahay dia manome ny mariky ny polisy, ny badge miaramila, ny fehikibo, ny buckles, ny nameplates, ny coin coin ary ny badge mpamaly vonjy maika hafa amin'ireo orinasa manerantany. Miaraka amin'ny laharam-pamokarana midadasika izahay dia manome vokatra ho an'ny sampan-draharahan'ny polisy, sampana mpamono afo ary tafika mitam-piadiana any amin'ny firenena samihafa manerantany. Ny fahaizanay mahay sy ny traikefa ananantsika manankarena dia ahafahantsika mihoatra ny mpiara-mianatra amintsika.
Ny vokatra omenay dia sandoka arak'asa. Ny fitaovantsika sy ny kojakoja rehetra ato aminay dia milamina amin'ny tontolo iainana. Ny kojakoja sy ny vatan'ny badge dia voaforona tanana avokoa. Ny vokatray dia manome famaranana isan-karazany plating. Rhodium dia manana loko sy volafotsy volafotsy, ary manana nikela ho fiarovana tsara ambonin'ny. Izahay koa dia manome takelaka volamena manarona mivantana ny varahina tany am-boalohany ary nofafazana fonosana miaro mangarahara hitazomana azy haharitra. Ny vokatray dia mahatanty ny fitsapana ny fitsapana rehetra, ny vokatra tsy manam-paharoa sy ny famaranana, ny solosaina manokana ary ny vola madinika fanamby, mahatonga ny fanamianao polisy na ny fanamiana ataon'ny mpamono afo ho velona.
Ho anay, ny zava-dehibe dia ny fahafahan'ny mpanjifantsika sy mahazo aina amin'ny vokatra ataonay. Raha tsy manome anao ny fitaovana tsara indrindra sy ny traikefan'ny mpampiasa tsara indrindra izahay haharaka ny asanao, dia tsy hisy mandritra ny 10 taona ny orinasanay. Manomboka amin'ny andro miadana ka hatramin'ny ezaka tsy misy fahatapahana, mitazona anao hanana fahefana sy mirehareha amin'ny asa ataonao izahay, ary mampanantena ny hamela anao ho tonga. Mifandraisa aminay avy hatrany na atombohy ny kaomandinao hahitanao ny fomba ahafahan'ny satroka ambony kalitao sy badge avo lenta mampiakatra moraly ho anao sy ny ekipanao.
Teo aloha: Mpanamboatra sinoa kalitao avo lenta namboarina fanontana CMYK fanontana fanontana manokana epoxy resin badge
Manaraka: Mpamatsy sinoa namboarina metaly maty nanapaka volamena Lapel Badge
Mpamatsy sinoa namboarina vy maty voapaika volamena ...